တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	အကျဉ်းသား ၉၀၀၀ကျော်လွှတ်ပေးရာမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါဝင်သလား? ဆိုတာကို မသေချာ၊ ပါစေခြင်းပေမဲ့ ပါမယ်လို.မထင်၊	September 23, 2008
တိုင်းရင်းသားအသံအကျဉ်းသား ၉၀၀၀ကျော်လွှတ်ပေးရာမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါဝင်သလား? ဆိုတာကို မသေချာ၊ ပါစေခြင်းပေမဲ့ ပါမယ်လို.မထင်၊
“We haven’t heard of any political prisoners being freed,” said Nyan Win,aspokesman for the opposition National League for Democracy (NLD), whose leader, Nobel laureate Aung San Suu Kyi, has been under house arrest for the last five years.“I do hope they will be released, but I don’t think it will happen.”